Buvela phi ubungendawo? | Iimpendulo Zemibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiVenda IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Buvela phi ubungendawo?
Ngubani owazama ukwenza uYesu enze into embi?—Mateyu 4:8-10
Ngokuqhelekileyo abantu bafuna ukuba noxolo, ukunyaniseka nokuba nobubele. Kutheni ke sisoloko sibona ubundlobongela, ukungabikho kobulungisa, nenkohlakalo? Iindaba ezihlasimlis’ umzimba yinto eqhelekileyo. Ngaba kukho umntu owenza abantu benze izinto ezimbi?—Funda eyoku-1 kuYohane 5:19.
Ngaba uThixo wabadala abantu baneengcinga ezimbi? Akunjalo, uYehova uThixo wabadala abantu ngokomfanekiso wakhe, ukuze bamxelise ekuboniseni uthando. (Genesis 1:27; Yobhi 34:10) Kodwa kwangaxeshanye wabanika inkululeko yokuzikhethela. Xa abazali bethu bokuqala bakhetha ukwenza okubi, bayeka ukuxelisa uThixo, baza banesono. Nathi sosulelwa sisono sabo.—Funda iDuteronomi 32:4, 5.
Ngaba siya kuhlala sibona ubungendawo?
UThixo ufuna sizilwe iingcinga ezimbi. (IMizekeliso 27:11) Ngoko usifundisa indlela yokuphepha ukwenza izinto ezingafanelekanga neyokufumana ulonwabo lokwenene. Okwangoku, asinakukwazi ukuxelisa uthando lukaThixo ngokupheleleyo.—Funda iNdumiso 32:8.
Nakuba ubungendawo buxhaphakile ngoku, uThixo ubuvumele ixesha elilinganiselweyo ukuze sibone iintlungu obuza nazo. (2 Petros 3:7-9) Kodwa, kungekudala umhlaba uza kuzaliswa ngabantu abonwabileyo nabathobela uThixo.—Funda iNdumiso 37:9-11.